Hardisk (Laptop) အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: MAY KHA Shopping
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ laptop လေးမှာ သိမ်းစရာတွေများလာလို့ နေရာမလောက်တော့ရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Hitachi 500 Gb . . = 46000 ကျပ်
Seagate 1000 Gb. = 78000 ကျပ်
seagate 320 Gb. . = 30000 ကျပ်
Toshiba. 500 Gb. = 46000 ကျပ်
viber 09796160052 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
အမည်: Hardisk (Laptop)